विवाह भोजमा चट्याङ पर्दा १६ जनाको मृत्यु, बेहुलासहित केही व्यक्ति घाइते ! - dautarimedia.com
विवाह भोजमा चट्याङ पर्दा १६ जनाको मृत्यु, बेहुलासहित केही व्यक्ति घाइते !
एजेन्सी । बङ्गलादेशमा एउटा विवाह भोज कार्यक्रमका लागि जाने क्रममा चट्याङ पर्दा सहभागी १६ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अधिकारीका अनुसार सो घटनामा परी बेहुलासहित अरु केही व्यक्ति भने घाइते भएको जनाइएको छ ।
Previous: अमेरिकामा फेरि कोराेना सङ्क्रमित र मृत्युदर बढ्ने चेतावनी
Next: स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण : भदौदेखि कोरोना संक्रमण दर घट्दै जाने